Bogga ugu weyn 20-ka Dhakhaatiirta Wadnaha ee ugu Mushaarka Badan | Gobolada iyo Wadamada ugu Wanaagsan
Baaritaanka caafimaadka ee Coronavirus. Dhakhtar ku dabool maaskaro ilaalin ah oo isticmaalaya stethoscope dhageysiga bukaanka waayeelka ah ee neefsanaya.
Dhakhtarka wadnaha waa mid ka mid ah dhakhaatiirta ugu mushaharka badan qaybta caafimaadka. Waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hubinta in wadnuhu si sax ah u shaqeeyo oo aanu xanuuno lahayn.
Wadnaha, oo ah xubinta ugu muhiimsan jidhka bini'aadamka, waxay u baahan tahay daaweyn gaar ah iyo kormeer joogto ah. Haddii aad u baahan tahay hubin, ogaanshaha, ama daawaynta cudurrada wadnaha la xiriira, dhakhtarkaagu wuxuu kaliya kuu diri karaa dhakhtarka wadnaha.
Dhakhaatiirta wadnaha ayaa si aad ah looga baahan yahay adduunka oo dhan, inkastoo xaqiiqda ah in dhakhaatiirtu ay baahi weyn u qabaan. Dhakhaatiirta wadnaha, dhanka kale, waa khabiiro wax ka qabta dhibaatooyinka wadnaha. Xanuun kasta oo wadnaha ku dhacana waxaa mar walba loo aqoonsan yahay xaalad naf-gooyo ah oo u baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah. Waa dhakhaatiir ku takhasusay daaweynta cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Mid ka mid ah sababaha ay dad badani u doortaan inay bartaan cilmi-nafsiga wadnaha ayaa ah baahida weyn ee dhakhaatiirta wadnaha ee adduunka oo dhan, taas oo aan loo badneyn inay isbedelaan si dhakhso ah. Baahida adeegyada wadnaha ayaa la filayaa inay kor u kacdo 20% wadamada sida Maraykanka 2025. Baahida dhakhaatiirta wadnaha ee karti u leh ayaa ka badan sahayda. Waxaa jira dhowr sababood oo yaraanta dhakhaatiirta wadnaha, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ayaa ah in barashada wadnuhu ay tahay mid aad qaali u ah oo waqti badan qaadata.
Si aad u fahamto wadnaha iyo kala soocidiisa dhinaca daawaynta, waxaad u baahan doontaa inaad samayso cilmi baaris badan. Dhakhaatiirtu waa lama huraan maadaama ay ka mid yihiin mihnadaha ugu mushaarka badan adduunka. Haddaba, annagoo aan sii dheerayn, aynu ka hadalno waxa uu yahay dhakhtarka wadnaha iyo sababta xirfaddu ay muhiim ugu tahay.
Dhakhaatiirta Wadnaha iyo Gaar ahaantooda
Kahor intaadan tixgelin mushaharka dhakhaatiirta wadnaha, waa inaad marka hore fahantaa waxa ay dhakhaatiirta wadnaha qabtaan iyo sida ay u kala duwan yihiin shaqadooda. Markaa waxaad fahmi doontaa sababta ay u yihiin mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan meeraha.
Dhakhaatiirta wadnaha waa takhaatiir baaris ku sameeya, qiimeeya, oo daaweeya dadka qaba dhibaatooyinka wadnaha iyo xididdada dhiigga (habdhiska wadnaha). Ahaanshaha dhakhtarka wadnaha waa hawl adag sababtoo ah waa xirfad u baahan in si buuxda loogu huro waxbarashada. Dhakhaatiirta wadnaha waxa ay maraan waxbarasho iyo tababar aad u balaaran. Afar sano oo dugsi caafimaad ah iyo saddex sano oo tababar daawaynta guud ah ayaa ka kooban barnaamijkan. Kadib markay dhammeeyaan tababarka guud ee caafimaadka gudaha, waxay ku qaataan seddex sano ama kabadan tababar khaas ah.
Ka dib marka uu dhammeeyo 10 sano ama ka badan oo dugsi iyo tababar ah, dhakhtarka wadnaha ee Maraykanka waa inuu ku aflaxaa imtixaan laba maalmood ah oo ay bixiso Guddiga Maraykanka ee Daawada Gudaha. Imtixaanku wuxuu qiimeeyaa aqoontooda, go'aankooda, iyo kartidooda si ay u bixiyaan daryeel aad u wanaagsan.
Dhakhaatiirta wadnaha ayaa ugu horeyn ka walaacsan wadnaha, laakiin maahan mid gaar ah. Dhakhaatiirta wadnaha, ma aha dhakhaatiirta wadnaha, waxay la tacaalaan dhibaato kasta oo wadnaha ah oo u baahan qaliin. Dhakhaatiirta wadnaha ma samayn karaan qalliin, inkastoo ay samayn karaan daaweyno gaar ah oo kala duwan. Takhtarka wadnaha dhexgalka, tusaale ahaan, wuxuu isticmaali karaa stent si uu u furo xididada xiran. Waxay sidoo kale ku dhejin karaan qalab casri ah wadnaha bukaanka wadnaha.
Dhakhaatiirta wadnaha ayaa ku takhasusay xanuunada wadnaha. Ciladuhu waa sida soo socota:
Ku filnaan la'aanta cadaadiska wadnaha
Cadaadiska dhiigga oo aad u sarreeya
Wadnaha garaaca wadnaha (xanuunka garaaca wadnaha oo aan caadi ahayn)
Dhibaatooyinka Valve ee wadnaha
Caabuqyada wadnaha waa nooc caabuq ah oo saameeya wadnaha.
Takhtarka wadnaha waxaa laga yaabaa inuu bukaan ku arko xafiiskooda ama isbitaal. Wadnaha waxa ay dabooshaa takhasusyo iyo qaybo badan oo kala duwan. Waa kuwan qaar ka mid ah laamaha wadnaha ee laga yaabo inaad xiisaynayso:
Wadnaha ee carruurta iyo dhalinyarada
Dhakhtarka wadnaha ee ka hortagga waa takhtar ku takhasusay ka hortagga cudurrada wadnaha.
Wadnaha xanuunka wadnaha
Markaa, hadda oo aad ogtahay waxa ay qabtaan dhakhaatiirta wadnaha, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inay mudan tahay in la sii wado xirfadda dhakhtarka wadnaha. Inaad noqoto dhakhtarka wadnaha waa wax aan la dafiri karin. Bal u fiirso qaar ka mid ah sababaha soo jiidashada leh ee ay waalidiintu u rabaan in carruurtoodu u shaqeeyaan sidii dhakhaatiirta wadnaha.
Dhakhaatiirta wadnaha waxay badbaadiyaan nolosha. Dhakhaatiirta wadnaha, badbaadinta nafaha ayaa ugu muhiimsan sababtoo ah waxay la tacaalayaan cudurrada halista ku ah mid ka mid ah xubnaha muhiimka ah ee jirka oo ah wadnaha. Waxay yareeyaan heerka dhimashada. Tani waa xirfad weyn oo dadka siisa farxad iyo ku qanacsanaanta inay dadka siiso fursad kale oo ay ku noolaadaan.
Dalka Maraykanka, dhakhaatiirtu waa xirfadda loogu ixtiraamo, xitaa adduunka. Dhakhaatiir ayaa loo baahan yahay maalin kasta. Marka loo eego cilmi baarista, 17.9 milyan oo qof ayaa sannad kasta u dhintaa cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, taas oo qiyaastii 32% ka ah dhammaan dhimashada adduunka.
Mushaharka. Mushaharka dhakhaatiirta wadnaha ee Maraykanku aad buu u sarreeyaa ilaa xadka dhammaan dhakhaatiirta wadnaha ee ugu mushaharka badan adduunka oo dhan, USA ayaa hogaaminaysa. Markaa, mushaharka awgeed, noqoshada dhakhtarka wadnaha sidoo kale waa u qalantaa.
Isku soo wada duuboo, Wadnaha wadnaha waa xirfad qaali ah oo lagu qanco laguna qanco waayo waxaad badbaadisaa nafta, waxaad heshaa mushaar fiican oo aad kasbato ixtiraam meel kasta oo aad tagto. Dhammaan faa'iidooyinkan ayaa horeyba loo soo koobay dhammaan sanadaha dheer ee waxbarashada si ay u noqdaan dhakhtarka wadnaha.
Immisa Ayay Helaan Dhakhaatiirta Wadnaha?
Dhakhaatiirta wadnaha waa dhakhtarka afraad ee ugu mushaharka badan, qaata celcelis ahaan $430,000, marka loo eego Warbixinta Magdhawga Medscape ee sanadka 2019.
Dhakhaatiirta wadnaha ayaa si fiican u magdhabay shaqadooda maadaama wadnuhu yahay xubin lagama maarmaan ah oo u baahan daryeel taxadar leh, xirfad leh. Dhakhaatiirta wadnaha inta badan waxay dalbadaan mushahar sare si ay uga caawiyaan inay iska bixiyaan deymaha ardaydooda iyo waajibaadyada kale ee waxbarasho. Sannadka 2019, dhakhaatiirta wadnaha ee wakhtiga buuxa waxay kasbadeen celcelis ahaan $351,827 sannadkii, oo ay ku jiraan gunnooyinka iyo kharashyada cashuurta laga jarayo. Sanadihii la soo dhaafay, magdhowgu si joogto ah ayuu u kacay waxayna u badan tahay inay sii socoto.
Qadarka lacagta aad samayn karto dhakhtarka wadnaha ahaan waxaa lagu go'aamiyaa goobtaada, heerka khibradaada, iyo tababarka.
Dhakhaatiirta wadnaha ee aan soo duulin ee hadda bilaabay xirfadahooda waxay caadi ahaan heli doonaan dakhli aad uga yar ta takhaatiirta wadnaha ee khibrada leh ee soo xaadiray tababar gaar ah. Kharashka ugu hooseeya ee la sheegay in dhakhtarka wadnaha ee dhameystay tababarkooda wuxuu ahaa $ 122,000, halka magdhowga ugu sarreeya ee la diiwaan geliyay uu ahaa $698,000.
Dalka Maraykanka, celceliska dakhliga qaranka ee dhakhtarka Wadnaha waa $381,100 sanadkii.
Takhtarka wadnaha ee qallafsan wuxuu helaa celcelis ahaan $648,000 sanadka ugu horeeya, sida ay sheegtay Merritt Hawkins. Marka loo eego Sahanka Wax-soosaarka Bixiyaha iyo Bixiyaha Wadnaha iyo xididdada dhiigga ee ay samaysay MedAxiom, celceliska dakhliga sannadlaha ah ee dhakhtarka wadnaha waa $577,329 dollars.
Waxaan ka arki karnaa tirooyinkan in mushaharka dhakhtarka wadnaha ee caadiga ahi uu ka sarreeyo sidii markii hore la filayay. Iyadoo ay taasi jirto, kaliya 54% dhakhaatiirta wadnaha ayaa aaminsan in si habboon loo magdhabay, iyada oo ku dhawaad ​​kala badh iyaga ka mid ah ay raadinayaan kor u kaca.
Sida Loo Noqdo Dhakhtarka Wadnaha
Wadnaha waa laan ka mid ah dawooyinka oo diiradda saara dhibaatooyinka wadnaha iyo habka wareegga dhiigga. Iyadoo lagu qiyaasay 80 milyan oo Maraykan ah ay qabaan hal ama in ka badan xanuunada wadnaha, iyo wadne xanuunka oo ah mid ka mid ah sababaha ugu horreeya ee dhimashada ragga iyo dumarka labadaba, dhakhaatiirta wadnaha ayaa laga yaabaa inay saameyn weyn ku yeeshaan caafimaadka bulshadooda.
Haddii aad rabto inaad dadka caawiso, xirfadda dhakhtarka wadnaha ayaa noqon karta mid aad u faa'iido leh. Haddaba, sidee baad u noqonaysaa dhakhtarka wadnaha? Si aad u noqoto dhakhtarka wadnaha iyo mid ka mid ah dhakhaatiirta ugu mushaharka badan, raac tillaabooyinka halkan lagu qeexay.
Helitaanka shahaado jaamacadeed oo afar sano ah waa tallabada ugu horeysa ee lagu noqonayo dhakhtarka wadnaha. Inta badan dadka raba inay ka shaqeeyaan daawada waxay soo qaataan shahaado saynis ama caafimaad la xidhiidha.
Shaqada koorsada caadiga ah ee shahaadooyinkan waxay inta badan diirada saaraan xisaabta iyo mawduucyada sayniska. Waa muhiim inaad si fiican u qabato dhammaan shaqada koorsadaada shahaadada koowaad sababtoo ah buundooyinkaaga waxaa lagu xisaabtami doonaa inta lagu jiro nidaamka oggolaanshaha dugsiga caafimaadka.
Inta lagu jiro sanadkaaga shahaadada koowaad, hubi inaad si heer sare ah u qabato maadaama tan sidoo kale laga yaabo in lagu tixgeliyo dugsigaaga caafimaadka.
2. Qaado Imtixaanka Ogolaanshaha Kuliyada Caafimaadka (MCAT)
Imtixaanka Ogolaanshaha Kulliyada Caafimaadka (MCAT) waa imtixaan la isku habeeyey, xulasho badan oo qiimeeya fikirkaaga xasaasiga ah, xallinta mashaakilaadka, iyo aqoonta sayniska. Dhibcaha MCAT waxaa looga baahan yahay badi dugsiyada caafimaadka taasoo qayb ka ah habka codsiga. Dhibcaha ugu yar ee MCAT ee looga baahan yahay gelitaanka dugsiga caafimaadka way ku kala duwan yihiin machad ahaan, marka sida ugu wanaagsan ee aad u sameyso imtixaanka, ayaa ah xulashooyin badan oo dugsi oo aad yeelan doonto.
3. Aad dugsiga caafimaadka.
Imaanshaha barnaamijka dugsiga caafimaadka ee afarta sano ah waa tallaabada xigta xagga noqoshada dhakhtarka wadnaha. Dhakhtarka caafimaadka (MD) ama takhtarka daawaynta lafaha (DO) waa labada ikhtiyaar ee dhakhaatiirta wadnaha. Maadooyinka sayniska aasaasiga ah sida pathology,pharmacoloji, anatomy, physiology, microbiology, iyo biochemistry waxa la bari doona inta lagu jiro labada sano ee ugu horeeya ee dugsiga caafimaadka.
Waxa aad u wareegi doontaa goob cisbitaal ah inta lagu jiro sannadka saddexaad ee dugsigaaga caafimaadka, halkaas oo aad isticmaali doonto aqoonta iyo kartida aad ka heshay muddada manhajkaaga labadii sano ee u dambeeyay ee dugsiga caafimaadka.
4. U tag shatiga caafimaadka.
Ruqsad caafimaad ayaa loo baahan yahay si loogu dhaqmo daawada. Habka helitaanka shatiga caafimaadka waxaa loo qaybiyaa heerar badan. Ka dib markaad dhammayso labada sano ee ugu horreeya ee dugsiga caafimaadka, waxaad qaadan doontaa imtixaanka shatiga caafimaadka ee ugu horreeya. Halka inta soo hartay la qaadan doono sanadka ugu dambeeya ee dugsiga caafimaadka.
5. Dhamaystir barnaamijka degenaanshaha
Sababtoo ah wadnoolojigu waa takhasuska caafimaadka gudaha, barnaamijka degenaanshaha ee Daawada Gudaha ayaa loo baahan yahay si uu u noqdo dhakhtarka wadnaha. Waxay qaadan doontaa saddex sano inaad dhammaystirto barnaamijka degenaanshahaaga Daawada Gudaha. Kahor intaadan bilaabin inaad ku takhasusto wadnaha ama nidaamka wadnaha, waxaad khibrad u yeelan doontaa qiimaynta iyo maaraynta arrimo caafimaad oo kala duwan.
Aad bay muhiim u tahay inaad diirada saarto hagaajinta CV-gaaga oo aad hesho tixraacyo xirfadeed inta lagu jiro barnaamijkaaga degenaanshaha si aad u noqoto musharrax u tartamaya iskaashiga wadnaha.
6. Hel shahaadaynta guddigaaga takhasuska weyn.
Waxaad ka heli kartaa shahaado guddiga caafimaadka gudaha dalkaaga marka aad dhammeysato barnaamijka degenaanshiyahaaga dawada gudaha. Haddii aad rabto inaad noqoto dhakhtarka wadnaha carruurta ama dhakhtarka wadnaha, waxaad sidoo kale dooran kartaa takhasus kale oo asaasi ah si aad u hesho shahaadada guddiga, sida dhakhtarka carruurta ama qaliinka. Haddi aad rabto in aad noqotid takhaatiirta wadnaha oo shahaado ka haysta guddiga, waxa aad u baahan doontaa shahaado shahaado taqasuskaaga hore.
7. Barnaamijka is-weheshiga wadnaha waa tallaabada xigta
Waxay ku qaadan doontaa saddex sano oo kale inaad dhammaystirto wehelnimada wadnahaaga. Waxaad baran doontaa sida looga hortago, loo ogaado, loo daweeyo, oo loo maareeyo tiro balaadhan oo ah cudurada wadnaha inta lagu guda jiro muddadan. Marka laga soo tago cilmi-baarista bukaan-socodka, waxaad ballaarin doontaa aqoontaada si aad u hesho faham dhammaystiran oo ku saabsan mawduuca wadnaha oo aad barato fulinta hababka wadnaha sida catheterization wadnaha iyo echocardiography.
Waxaad tahay dhakhtar wadnaha ah oo diyaar u ah in uu keligaa ku barto daawaynta dhinaca wadnaha marka aad dhammayso barnaamijka wehelnimada wadnaha.
8. Raadi goobo shaqo
Marka aad hesho waxbarashada ku habboon, waayo-aragnimada, shatiyada, iyo shahaadooyinka si aad ugu shaqeyso dhakhtarka wadnaha, waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo raadinta boosaska iyo diyaarinta codsiyada. Ka bilow inaad ka raadiso fursadaha wadnaha ee agagaarkaaga internetka.
9. Samee qormo shaqo iyo taariikh nololeed.
Ka dib markaad heshid doorarka dhakhtarka wadnaha ee aad rabto inaad codsato, waa inaad isticmaashaa sharaxaadda shaqada si aad u horumariso resume online ah kaas oo muujinaya sifooyinkaaga shaqaaleysiinta ee ugu xoogan ee boosaska dhakhtarka wadnaha ee gaarka ah ee aad rabto inaad codsato.
10-ka waddan ee ugu mushaharka badan dhakhaatiirta wadnaha
Guud ahaan, mushaharka dhakhtarka wadnaha waa kala duwan yahay iyadoo ku xiran arrimo kala duwan sida sannadaha khibradda iyo goobta. Iyada oo ay ku adag tahay ardayda caafimaadka inay iska diiwaan geliyaan dugsiga caafimaadka oo ay weheliso kharashka dugsiga sare, waa arrin aad u muhiim ah dhakhaatiirta wadnaha inay helaan lacag sare. Mushaharka dhakhtarka wadnaha ee ugu mushaharka badan waxaa laga heli karaa wadamada soo socda:
Switzerland ( Mushaharka - $517,365 )
Dhakhaatiirta wadnaha ee ku takhasusay shaqada gaarka ah ee ka sarraysa booskooda ayaa qaata qiyaastii CHF500,000 sanadkii, sida uu qabo Ururka Dhakhaatiirta Caafimaadka Swiss.
2. Kanada ( Mushaharka – $450,000)
Sida laga soo xigtay Ururka Dhakhaatiirta Kanada, Dhakhaatiirta wadnaha ee ujrada ku baxa ayaa ah inta badan dhakhaatiirta wadnaha ee dalka. Celcelis ahaan kharashka guud ee Wadnaha ee adeega dhakhtarkiiba waxa ay ahayd qiyaas CA$600,000, iyada oo celcelis ahaan boqolkiiba ay ka sarreyso 23%. Gobollada Ontario iyo Quebec waxay lahaayeen dhakhaatiirta wadnaha ee ugu badan dalka.
3. Belgium ( Mushaharka – $442,000 )
Mushaharka dhakhtarka wadnaha ee Belgium aad ayuu u kala duwan yahay iyadoo ku xiran hadba meesha aad ka shaqeyso iyo haddii aad u shaqeyso dowladda ama qaybta gaarka ah. Mid ka mid ah Tongeren wuxuu helaa celcelis ahaan € 115,000 sannadkii, halka kan kale ee Antwerp uu helo guud ahaan € 300,000. Xirfadda gaarka ah waxay heshaa qiyaastii € 400,000, sida uu qabo wargeyska De Morgen.
4. Maraykanka ( Mushaharka – $437,000)
Laga bilaabo Juun 28, 2021, celceliska dhakhtarka Wadnaha - Mushaharka Aan-Invasive ee Mareykanka waa $400,100, oo leh kala duwanaansho mushahar ah $324,400 ilaa $484,400. Kala duwanaanshaha mushaharku waxay ku tiirsan yihiin waxyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan dugsi-dhigashada, shahaadooyinka, kartida dheeriga ah, iyo tirada sanadaha aad ka shaqeysay goobtaada.
5. Australia ( Mushaharka – $304,000)
Wadnaha, ka dib qaliinka neerfaha iyo indhaha, waa shaqada saddexaad ee ugu mushaharka badan takhasuska caafimaadka, sida laga soo xigtay Xafiiska Canshuuraha ee Australia. Mushaharka sanadlaha ah ee AU$454,000 waa suurtagal.
6. Nederlaan ( Mushaharka – $276,485 )
Celcelis ahaan dakhliga guud ee bishii ee dhakhtarka wadnaha ee Nederland wuxuu u dhexeeyaa € 5,800 iyo € 10,800. Shaqaalaha madaxa banaan waxay samayn karaan ilaa €250,000 sanadkii. Tababarka dhakhtarka wadnaha ee Nederlaan wuxuu qaadan karaa ilaa 12 sano.
7. Faransiiska ( Mushaharka – $258,000)
Faransiiska gudihiisa, khubarada gaarka ahi waxay sameeyaan wax aad uga badan kuwa caadiga ah. Dhakhaatiirta wadnaha waxay kasbadaan qiyaastii €233,361 khidmadaha saafiga ah ee sanadlaha ah, sida uu qabo Ururka Qaranka ee Ururada La Ansixiyay.
8. Jarmalka (Mushaharka – $212,000)
Dhakhaatiirta Wadnaha ee Bremen, sida uu qabo Ururka Qaranka ee Dhakhaatiirta Caymiska Caafimaadka Sharciga, ayaa ka mid ah mushaharka ugu wanaagsan ee dalka, iyadoo dakhliga guud ee bishii uu ka badan yahay 16,000 euro, halka kuwa Hamburg ku nool ay helaan ku dhawaad ​​13,500 euros. Kuwa ka shaqeeya Berlin, caasimadda, waxay helaan qiyaastii 7,300 euro bishii.
9. Boqortooyada Ingiriiska ( Mushaharka – $136,500)
Boqortooyada Midowday (UK), khabiirada badankood waxay u shaqeeyaan Adeegga Caafimaadka Qaranka (NHS). Ardayda cisbitaalka da'da yar waxay filan karaan inay helaan £27,150 sanadka ugu horeeya ee tababbarka aasaaska, taasoo kor ugu kacaysa ilaa £31,422 sanadka labaad. Bilaabida mushaharka dhakhaatiirta u qalma ee tababarka takhasuska leh waxay ka bilowdaan £37,000 sanadkii waxayna kor u kacaan £47,000 marka uu tababarku socdo. Dhakhtarka wadnaha oo aqoon buuxda u leh waxa uu qaataa inta u dhaxaysa £39,000 iyo £72,850 sanadkii. Mushaharka aasaasiga ah ee sanadlaha ee dhakhtarka wadnaha ee la-taliyaha wuxuu u dhexeeyaa £77,900 ilaa £105,042.
10. Israa’iil ( Mushaharka – $74,920 )
Israa'iil waxay qiimo sare ku leedahay adeegga dadweynaha iyo horumarinta tignoolajiyada casriga ah. Natiijo ahaan, waxay waddaa nidaam daryeel caafimaad oo casri ah. Isbitaalada iyo rugaha caafimaadka ayaa u heelan inay bixiyaan dollarka ugu sarreeya si ay u qortaan oo ay u ilaashadaan maskaxdooda caafimaad ee ugu dhalaalaysa, iyadoo dhakhaatiirta guud ay helaan celcelis ahaan $74,920 sanadkii iyo khabiiro ay helaan ku dhawaad ​​$147,421.
Dawladaha Kala Duwan ee Maraykanka oo leh Mushaharka Dhakhaatiirta Wadnaha ee Bixiya ugu Sareeya
Goobaha kala duwan ee dalka ayaa bixiya fursado kala duwan dhakhaatiirta wadnaha. Si lagaaga caawiyo go'aaminta gobolada ugu fiican ee dhakhaatiirta wadnaha, halkan waxaa ah 20-ka gobol ee ugu sarreeya Maraykanka, oo u kala sarreeya kuwa ugu fiican ilaa kuwa ugu xun dhakhaatiirta wadnaha.
Mushaharka sanadlaha ah $349,402
Bixinta bishii $29,117
Bixinta toddobaadlaha ah $6,719
Bixinta saacadiiba $167.98
Mushaharka sanadlaha ah $349,335
Bixinta bishii $29,111
Bixinta toddobaadlaha ah $6,718
Bixinta saacadiiba $167.95
Mushaharka sanadlaha ah $337,305
Bixinta bishii $28,109
Bixinta toddobaadlaha ah $6,487
Bixinta saacadiiba $162.17
4. Waqooyiga Dakota
Mushaharka sanadlaha ah $331,028
Bixinta bishii $27,586
Bixinta toddobaadlaha ah $6,366
Bixinta saacadiiba $159.15
Mushaharka sanadlaha ah $329,100
Bixinta bishii $27,425
Bixinta toddobaadlaha ah $6,329
Bixinta saacadiiba $158.22
Mushaharka sanadlaha ah $326,500
Bixinta bishii $27,208
Bixinta toddobaadlaha ah $6,279
Bixinta saacadiiba $156.97
Mushaharka sanadlaha ah $323,778
Bixinta bishii $26,982
Bixinta toddobaadlaha ah $6,227
Bixinta saacadiiba $155.66
8. Koonfurta Dakota
Mushaharka sanadlaha ah $321,362
Bixinta bishii $26,780
Bixinta toddobaadlaha ah $6,180
Bixinta saacadiiba $154.50
Mushaharka sanadlaha ah $317,869
Bixinta bishii $26,489
Bixinta toddobaadlaha ah $6,113
Bixinta saacadiiba $152.82
Mushaharka sanadlaha ah $316,072
Bixinta bishii $26,339
Bixinta toddobaadlaha ah $6,078
Bixinta saacadiiba $151.96
Mushaharka sanadlaha ah $313,267
Bixinta bishii $26,106
Bixinta toddobaadlaha ah $6,024
Bixinta saacadiiba $150.61
Mushaharka sanadlaha ah $307,369
Bixinta bishii $25,614
Bixinta toddobaadlaha ah $5,911
Bixinta saacadiiba $147.77
Mushaharka sanadlaha ah $306,273
Bixinta bishii $25,523
Bixinta toddobaadlaha ah $5,890
Bixinta saacadiiba $147.25
Mushaharka sanadlaha ah $305,368
Bixinta bishii $25,447
Bixinta toddobaadlaha ah $5,872
Bixinta saacadiiba $146.81
Mushaharka sanadlaha ah $303,337
Bixinta bishii $25,278
Bixinta toddobaadlaha ah $5,833
Bixinta saacadiiba $145.84
Mushaharka sanadlaha ah $296,330
Bixinta bishii $24,694
Bixinta toddobaadlaha ah $5,699
Bixinta saacadiiba $142.47
Mushaharka sanadlaha ah $296,179
Bixinta bishii $24,682
Bixinta toddobaadlaha ah $5,696
Bixinta saacadiiba $142.39
Mushaharka sanadlaha ah $293,054
Bixinta bishii $24,421
Bixinta toddobaadlaha ah $5,636
Bixinta saacadiiba $140.89
Mushaharka sanadlaha ah $291,732
Bixinta bishii $24,311
Bixinta toddobaadlaha ah $5,610
Bixinta saacadiiba $140.26
Mushaharka sanadlaha ah $287,507
Bixinta bishii $23,959
Bixinta toddobaadlaha ah $5,529
Bixinta saacadiiba $138.22
Immisa ayuu qaataa dhakhtarka wadnaha gudaha UK?
Mushaharka bilowga ah ee dhakhtarka wadnaha ee sare wuxuu u dhexeeyaa £41,158 ilaa £76,751. Mushaharka aasaasiga ah ee sannadkiiba dhakhtarka wadnaha lataliye ahaan wuxuu u dhexeeyaa inta u dhaxaysa £82,096 iyo £110,683, iyada oo ay suurtogal tahay inaad hesho wax badan haddii aad leedahay masuuliyado maamul ama waxbarasho oo dheeraad ah.
2. Wadnahadu ma ka mid yahay shaqooyinka ugu mushaharka badan?
Haa, waa mid ka mid ah tobanka ugu sarreeya ee takhasuska caafimaadka ugu mushaharka badan.
Waa kuwee dhakhaatiirta ugu mushaharka badan adduunka?
Waa kuwan liiska 10-ka dhakhtar ee ugu mushaharka badan:
3. Waa maxay nooca dhakhtarka wadnaha ee sameeya lacagta ugu badan?
Dhammaan dhakhaatiirta wadnaha waxay kasbadaan lacagta ugu badan ee takhasuska cudurada wadnaha.
4. Takhtarka wadnaha ma sameyn karaa 1 milyan sanadkii?
Sida laga soo xigtay Medscape, celceliska mushaharka sannadlaha ah ee dhakhaatiirta wadnaha ayaa wax yar ka kordhay sannadkii hore, oo kor u kacay $ 423,000 2018 ilaa $ 430,000 sanadka 2019. In ka badan kala badh dhakhaatiirta wadnaha ayaa haysta hanti dhan $ 1 milyan ilaa $ 5 milyan, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah dhakhaatiirta ugu qanisan Maraykanka .
5. Halkee dalka ugu fiican ee lagu baran karaa wadnaha?
Waxaad ku baran kartaa wadnaha mid ka mid ah xarumahan:
Jaamacadda Harvard. Maraykanka|Cambridge (US)
Imperial College London. Boqortooyada Ingiriiska |London (UK)
Jaamacadda Duke. Mareykanka | Durham (North Carolina, Mareykanka)
Jaamacadda Columbia. Maraykanka|Magaalada New York
Dugsiga Caafimaadka Icahn ee Mount Siinaay
Ugu dambeyntii, dhakhaatiirta wadnaha ayaa lama huraan u ah aadanaha sababtoo ah waxay si joogto ah u badbaadiyaan nolosha. Dhakhaatiirta Wadnaha, waa in ay ka mid noqdaan dhakhaatiirta ugu mushaharka badan adduunka, marka loo eego wakhtiga iyo dadaalka ay galiyeen waxbarashada iyo hurista. Sidoo kale, Dhakhaatiirta Wadnaha waa in la abaalmariyo marka lagu daro mushaarkooda.
Sidoo kale, haddii aad rabto inaad noqoto dhakhtarka wadnaha, waxaad sii wadi kartaa shaqo mushahar sare leh oo laga aqoonsan yahay sharaf iyo ixtiraam adduunka oo dhan.
Ka hor inta aan laga hadlin shaqaalaha bulshada ee ugu mushaharka badan, waa in qofku fahmo waxa shaqada bulshadu tahay iyo cidda shaqaale bulsho ah ...
15 Aaladaha Horumarinta App -ka Mobile -ka ee Bilaashka ah ee Bilowga ah 2022 -ka
Inaad kor ilaa hoos u qorto koodhadhka abka kasta ee moobilka waa welwel iyo hawlqabad. Isticmaalka…
10 Ku dhawaad ​​Aaladaha Suuqgeynta Bilaashka ah ee Bilowga ah 2022
Iyada oo tirada badan ee meheradaha ay ka dillaacayso adduunka, milkiilayaasha ganacsigu waxay u baahan yihiin gees tartan ah. Oo dijital ah…